USA: Aqalka Cad oo ka fiirsanaya in Rex Tillerson lagu beddelo Agaasimaha CIA – Kasmo Newspaper
USA: Aqalka Cad oo ka fiirsanaya in Rex Tillerson lagu beddelo Agaasimaha CIA
Updated - December 1, 2017 6:20 pm GMT
London (Kasmo), Aqalka Cad ee Maraykanka ayaa qiimaynaya haddii Xoghayaha Arrimaha Dibadda. Rex Tillerson, lagu beddeli karo iyo haddii kale, Agaasimaha Sirdoonka CIA, Mike Pompeo.
Warka waxaa, Khamiistii, 30kii Nofember 2017 ku dhawaaqay saraakiil ka tirsan maamulka Maraykanka, oo ku macneeyay in ay suuragl tahay in Pompeo qudhiisa lagu beddelo Senatorka Jamhuuriga Arkansas, Tom Cotton, oo la sheegay in ay isku aragti dhowyihiin Madaxweynaha, dhanka arrimaha nabadgalyada.
Wargayska New York Times ayaa qoraya in qorshaha beddelka Tillerso uu ka dambeeyo Agaasimaha Madaxtooyada, John Lelly, lagana yaabo in la hirgaliyo bilowga sannadka 2018ka.
Sababta go’aankaas waxaa loo malaynayaa in ay la xiriirto xiisadda ka dhex taagan iyo khilaafka soo kala dhexgalay Tillerson iyo Trump, sida Heshiiskii Nuklearka Iiraan iyo qalalaasaha Kuuriyada Woqooyi.
Trump wuxuu marar badan ereyo qallafsan u adeegsaday Rejiimka Pyongyang, isaga oo ugu hanjabay in uu burburin doono haddii ay ku noqdaan halis dhow dalka Maraykanka. Laakiin Tillerson wuxuu marar badan ku nuuxnuuxsaday in fursadda wadahadalka ay tahay mar kasta arrin suuragal ah oo la taaban karo.
Kolleyba Madaxweyne Trump wali ma saxiixin qorshaha Kelly, laakiin wuxuu miijiyay in uu danaynayo beddelka Xoghayaha Dibadda dhammaadka sannadkiisa 1aad ee xafiiska.
Tillerson oo horey Agaasime uga soo noqday Exxon Mobil oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Maraykanka ee Shidaalka, waxaa xilka loo magacaabay 1dii Febrayo 2017, isaga oo beddelay John Kerry.
Magacaabistiisa waxaa qaar badan u arkayeen tijaabo shaybaar oo kale, mar haddii, isaga ka horow, waligeed aan Xoghaye Dibadeed loo magacaabin qof aan lahayn khibrad Xukuumadeed, mid siyaasadeed iyo mid Militari oo hore toona.